Tommy's Love Stories: Burmese Tomboys & Lesbian များရဲ့အလှူ
ကျွန်တော်တို.က လူတစ်ယောက်စီအဖြစ်မွေးဖွားလာပေမယ့် လူ.ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်သူများလို. တံဆိပ်ကပ်ခံခဲ့ရသူတွေပါ။
မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေးစိတ်ပေါက်တာ၊ မိန်းကလေးအချင်းချင်း စိတ်ဝင်စားတတ်တာကို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အချို.သောသူတွေက မသိချင်ယောင်ဆောင် လက်ခံပေးခဲ့ကြပေမယ့်၊ အများစုကတော့ အခြောက်မ၊ ယောကျာ်းရှာမ၊ ဘောပြား အစရှိတဲ့ မတူမတန် အဖတ်လုပ်မခံရလောက်အောင် နှိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ .. ကျွန်တော်တို.က လူသားအဖြစ်မွေးဖွားလာတာပါ။ ယောကျာ်း၊ မိန်းမ တံဆိပ်ကပ်ဖို. မွေးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို လျောက်ရင်း၊ ဘ၀တူတွေဆုံဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို. အားလုံး လေးစားချစ်ခင်တဲ့ ကိုချိုကိုနိုင်က ဦးစီးပြီး၊ Burmese Tomboys & Lesbian ဆိုတဲ့ Official Facebook Page လေးတစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးချင်း လိင်တူချစ်သူတွေ အတွက် ဖွင့်ထားခဲ့တယ်။ ဒီ Page လေးမှာ ကျွန်တော်တို. ခံစားချက်တွေ ရင်ဖွင့်ကြတယ်၊ နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်ကြတယ်၊ သတင်းလေးတွေ ဖလှယ်ကြတယ်။ လူသားတွေပီသစွာဘဲ ကိုယ်ကျိုးတင်မကဘဲ၊ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာအတွက် အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်အနေနဲ့ ပါဝင်ချင်လာကြတယ်။
ကျွန်တော်တို.အဖွဲ.ထဲမှာ အများအားဖြင့် ပါဝင်ကြတာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အရွယ်လူငယ်လေးတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို.အသက်တွေငယ်ပေမယ့်၊ စေတနာ သဒ္ဒါတရားနဲ့ တာဝန်ယူချင်စိတ်တွေ မငယ်ခဲ့ကြဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေကြတဲ့ သူတွေသာမက၊ ကမ္ဘာအနှံ.မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာ Tomboys & Lesbian တွေက အခုတော့ ကျွန်တော်တို.ရဲ. အမိနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲချို.တဲ့စွာ အသက်ရှင်နေကြရတဲ့ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ သာသနာပြုနိုင်ရန်နဲ့ တိုင်းရင်သားမိဘမဲ့ကလေးငယ်များရဲ့ စာသင်ကြားရေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှ အလှူကုသိုလ်တို.ကို 23.6.2013 (တနင်္ဂနွေနေ့) မှာ အောင်မြင်စွာ အလှူမှုပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ကိုကြီး ချိုကိုနိုင်မှ အစ.. အလှူငွေကောက်ခံရေး၊ စာရင်းပြုစုရေး၊ မော်တော်ယာဉ် စီစဉ်ရေး အစရှိတဲ့ အစစအရာရာကို တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ အစ်ကိုတွေ၊ ညီတွေ၊ ညီမတွေ အားလုံးကိုလဲ လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို.ရဲ့ သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး မှတ်တိုင်အဖြစ် စိုက်ထူခဲ့ရတဲ့ အလှူဒါနရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလဲ ဝေမျှ ခံစားရင်း၊ သာဓုခေါ်ဆို ကုသိုလ်ယူကြပါဦး ခင်ဗျာ။
Posted by Tommy Girl at 9:49 AM
ဂုဏ်ယူပါတယ် ဗျာ ကျွန်တော်လည်းအဖွဲ့ဝင်ချင်ပါတယ်။
ကူညီချင်ပါတယ် အကိုတို့ရေ ဘယ်လိုအဖွဲ့ဝင်ရမလဲဗျို့
Tommy Girl June 23, 2013 at 11:07 AM
Choco Naing Facebook ကို Add ပြီး၊ အဖွဲ.၀င်ဖို. ပြောလို.ရပါတယ်။း)
Peter Pan June 23, 2013 at 12:18 PM
Tommy Girl June 24, 2013 at 8:34 AM
Ruslan.Myo June 24, 2013 at 7:00 AM
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..း)
Choco Naing June 29, 2013 at 3:55 PM
အထွေးရေ ကျေးဇူးတင်တယ် အခုလို ဝေေ၀ဆာဆာဖော်ပြပေးတာကို။ <3
Moe Gyi September 20, 2013 at 4:55 AM
Proud to beamember of this group...
Anonymous April 23, 2014 at 6:14 AM
Tommy Girl April 24, 2014 at 10:26 AM
:) Hi all, Thanks for your comments!
Anonymous April 24, 2014 at 10:56 PM
ကျွန်တော်က ၇ တန်းဗျ ချစ်သူကတော့နှစ်ယောက်ရှိတယ်
ကျွန်တော်ကthird yearဗျ အချစ်တော်လဲရှိပါတယ်
Anonymous November 23, 2015 at 8:57 AM
စိတ်​ကူးယဉ်​ဆန်​​ပေမယ့်​ဖတ်​လို့​ကောင်းပါတယ်​ကြိုက်​ပါတယ်​ စာ​တွဆက်​​ရေးပါအုန်း အထူသဖြင့်​ပညာ​ပေး​လေး​တွေထည့်​​ရေး​စေချင်​ပါတယ်